Njem Dali Day si Barcelona | Otu Di na Nwunye
March 21, 2017 / 12 Comments
Mgbe ị na-eleta obodo ndị ọhụrụ, ịga njem ụbọchị bụ ụzọ dị mkpa iji mee ka ahụmahụ gị dịkwuo elu, ohere ndị ị ga-ewe njem ụbọchị si Barcelona ga-agwụ agwụ. N'oge anyị na-aga njem na Barcelona, ​​anyị nwetara ohere dị otú ahụ iji gaa njem nleta na Salvador Dali Ụlọ ihe nkiri na Museum dị na Girona, tinyere ụlọ ya mara mma na nke aka ya na Port Lligat, nke dị n'akụkụ ugwu dị n'ụsọ oké osimiri nke Spain. Dị ka onye na-amụrụ ihe, na onye na-adị ndụ ogologo oge nke Dali, enwere m obi ụtọ maka njem a, ọ daghị!
Malite na ụlọ ọrụ nlegharị anya na ogbe ndịda Barcelona, ​​dịka ole na ole na-aga site na nkwari akụ anyị, anyị na ndị ọzọ na-eme njem nleta asatọ ma ọ bụ ndị ọzọ zutere anyị. Onye ọ bụla n'ime anyị nọ na-asụ Bekee, yabụ onye ndu ahụ gosipụtara onwe ya n'asụsụ anyị ma kọwaa nkọwa na oge usoro njem ahụ. Ọ dị ezigbo enyi ma zaa ajụjụ ọ bụla anyị nwere tupu anyị apụ, yana kwa ụbọchị! Anyị na-aga na ụbọchị anyị njem si Barcelona na Costa Brava!
Gburugburu akụkụ ọ bụla - ihe ọzọ dị mma.
Ọkwọ ụgbọala ahụ na-ewe gị gburugburu ebe ndị mara mma dị n'akụkụ ebe ndị njem nlekọta ahụmahụ na-agafe n'okporo ụzọ, na-akọ akụkọ ihe mere eme nke ebe ị na-agafe yana ihe ndị na-adọrọ mmasị ma dị ịrịba ama banyere Dali n'onwe ya. Ihe omuma banyere onye na-ese ihe na ihe ngosi nka na ụlọ ya masịrị anyị.
The Dali Ụlọ ihe nkiri na Museum
Mgbe anyị ruru ihe dị ka awa abụọ, anyị rutere Dali Theater na Museum dị na Figueres, Girona. Emere ya na 1974, ọ na-ahụkarị ọtụtụ nchịkọta ọrụ ya. A na-achọ ya na nnukwu ihe oyiyi nke àkwá na mgbada, na mgbidi na-acha uhie uhie na-ekpuchi ya na achicha, ọ bụ mmadụ efu. Were otu nkeji iji nwee mmasị na iche iche nke ọdịdị dị n'èzí; ọ bụ naanị mmalite nke ihe osise dị ịtụnanya nke si n'echiche Dali.
Mgbe anyị banyere ụlọ ngosi ihe ngosi nka, ahụmịhe mbụ anyị na-emetụ ya. A 1941 Cadillac, nke zuru ezu na onye na-abụghị onye njem, agbanwewo ghọọ oké mmiri ozuzo - n'ime. Ihe dị mma nke mkpụrụ ego a na-enweta na ego, ọhụụ Dali maka ibe a bụ nkọwa banyere otú ọ ga-esi yie ka ọ ga-enwe ụgbọ mmiri mgbe mmiri na-ezo! Site n'ebe ahụ ị nweere onwe gị ịgagharị ụlọ ihe ngosi nka n'onwe ya, mgbe ị banyere, ị ga-ahụ onwe gị n'ihu otu n'ime ọrụ ya a ma ama, "Gala Contemplating the Mediterranean Sea". Ọ bụ ezie na, na ilele anya mbụ, ihe ị ga-ahụkarị bụ nsị nke Abraham Lincoln kama ịlụ nwunye ya ọ hụrụ n'anya, Gala.
Ihe Dali na-eche n'echiche ya - Gala.
Ntụziaka ọsọ ọsọ: Ị ga-ahụ nwunye Galaị Gala na-anọchite anya ya ugboro ugboro n'ime ọrụ ya. Ọ bụ ya na-arụ ọrụ ya, ma biri n'ụlọ ọ wuru n'ụsọ oké osimiri na Cadaques, ebe ọ nwụrụ na 1982.
Dali jiri nyocha ọ bụla, ọbụna Cadillacs, gosipụtara amamihe ya.
Jide n'aka na ị ga-agagharị n'okporo ụzọ na okirikiri ala na ụlọ ihe ngosi nka, mgbidi ọ bụla na-ezipụta amamihe Dali na, ma eleghị anya, nkwụsịtụ. Ihe ọzọ a ma ama bụ ụlọ Mae West, ebe ihe ndina na ihe ndị ọzọ na-agbanye ihu ya mgbe ị na-arịgo staircase dị n'azụ ụlọ ahụ iji lelee ya site na nhazi ya!
Ụlọ ngosi ihe ngosi a pụrụ iche ọ bụghị naanị nnukwu nchịkọta ya, ma ụfọdụ n'ime ọrụ ya kachasị mma, tinyere ihe ntanye onwe ya na anụ ezi grilled (1941), Poetry America-Cosmic Athletes (1943), Galarina (1944-45), Nri (1945), Leda Atomica (1949), Galatea nke Spheres (1952) na Crist de la Tramuntana (1968). Na mgbakwunye na nnukwu ụlọ ahịa ahụ, ihe owuwu ahụ na-ekpuchi ọnụ ụlọ nke Dali na-atụgharị anya na ihe ndị na-eme ka ọ dị na ya, tinyere akwụkwọ osise ikpeazụ ya, Swallow's Tail, kere na 1983.
N'ebe etiti Cadaques, na Dali's Statue.
Ka anyị na-agafe n'okporo ụzọ ndị na-agbagharị agbagharị, e nwere akụkọ ihe mere eme n'oge ọ bụla. Site na mmalite ihe osise na-ese onyinyo, ọ na-esiri ike ịghara iche ụdị mmanya na-aba n'anya n'etiti ọgụgụ isi ya, echiche ọ bụla bụ naanị otu ihe ọzọ na-enweghị atụ iji weghaara anyị n'ụlọ site njem anyị na-agba na Barcelona.
Ntụziaka ọsọ ọsọ: Gbalịsie ike ile anya ka ị na-agafe n'akụkụ dị iche iche nke ụlọ ihe ngosi nka, ọ bụghị ihe niile a na-agbanye na mgbidi!
Kedu nke ị na-ahụ - Lincoln ma ọ bụ Gala?
Na mgbakwunye na ihe osise Dali, ihe kachasị amata ọrụ ya, anyị letara ihe osise nke ọla ndị e ji ya rụọ. Ihe na-egbuke egbuke na nke na-akpali iche echiche, obere ụlọ ahịa a na-eme ka ị nwee ike ịhụ ihe ndị a dị oke ọnụ n'azụ iko. N'ezie, ọ gaghị efu gị!
Mgbe anyị weghaara oge anyị iji nweta ihe niile ụlọ ọrụ ihe ngosi ahụ na-enye, anyị gbapụrụ n'èzí ka anyị rie nri na obere kọfị na-aga n'okporo ámá ebe anyị nwetara obere sandwiches si n'aka onye nwebatara onye ọbịa. Mgbe ezumike n'èzí, ọ bụ oge iji nọgide na-aga ... na Cadaques!
Na-echeta mgbe nile iji lee UP!
Ụlọ Dali na Port Lligat, Cadaques
Obere ụgbọala site na ihe ngosi nka bụ obodo dị n'ụsọ oké osimiri nke Cadaques, ebe ị nwere ike ịhụ ihe oyiyi dị egwu nke Dali (nnukwu foto op!) Ma chọta nri dị ụtọ mgbe ị na-eri nri n'akụkụ osimiri. N'ịbụ nke dị na Costa Brava n'Oké Osimiri Mediterenian, obodo ahụ dị jụụ nke nwere ụlọ ahịa na-edozi ahụ na-edozi ahụ ma dị iche iche na ụlọ oriri na ọṅụṅụ megide ebe ugwu ugwu.
Na-aga ije n'okporo ụzọ na-asọ oyi na mmiri, echiche ahụ dị egwu site n'ugwu oké osimiri, na n'agbanyeghị ọnọdụ ihu igwe, anyị kwụsịrị uwe anyị ma jiri obi ụtọ nọdụ n'èzí iji rie nri ehihie anyị. Mgbe iko mmanya ole na ole, ụfọdụ sardines na toast, na izute otu enyi na enyi enyi anyị, anyị mere ka anyị laghachi azụ n'okporo ámá na-adịghị ọcha ma bịarute ìgwè ahụ maka obere ụgbọ na-aga n'ụlọ Dali na Port Lligat.
Na-ezute enyi ọhụrụ na Cadaques.
Ụlọ Salvador Dali na ụlọ ihe ngosi nka na Port Lligat onye nna ya ukwu mepụtara ya, ụzọ dị iche iche nke ọnụ ụzọ na ụlọ ndị dị iche iche na-eju anyị anya n'akụkụ ọ bụla. Ewubere na mmiri n'ime ime obodo a na-akụ azụ, ọ dịka Salvador na isi nke Gala ruo 1982. A zụrụ na 1930, Salvador na Gala malitere ịmalite n'inwe ohere mbụ ha ruo mgbe ọ ruru akụkọ abụọ na isii na-ejikọta oghere ebe ha gosipụtara ihe ụtọ ha. Ọ na-adọrọ mmasị ya karịsịa n'ìhè na ebe a mara ebe a mara mma, nakwa na ọ dị anya site n'okporo ámá obodo ndị nwere ọrụ.
Mgbe anyị bịarutere n'okporo ụzọ dị ntakịrị nke na-eduga n'ụlọ ahụ, anyị bịara n'ile anya n'ọdụ ụgbọ mmiri ahụ dị jụụ ma dị jụụ n'akụkụ aka ekpe. Ụlọ ahụ dị ọcha, ọdịiche dị ịrịba ama megide igwe ojii na-acha uhie uhie n'ụbọchị ahụ, ebe ọ bụ na ọ dị ntakịrị ntakịrị anya na mbụ ... n'èzí!
Ntinye nke ụlọ ya na-eme ka ị bụrụ mmalite nke ọhụụ dị n'ihu - nnukwu anụ ọhịa na-ebu oriọna na mpaghara ebe. Ọ bụ ezie na ebe mbụ a na-ebi ndụ, yana mpaghara ndị ọzọ, ka a na-agafe n'ihu ọha, ọtụtụ n'ime ụlọ ahụ na-emeghe maka nyocha ebe ị nwere ike iwepụta ọtụtụ foto dịka ịchọrọ! Anyị nweere onwe anyị ịgagharị n'ụlọ ahụ dum, gụnyere ebe mmiri dị egwu na azụ, ebe ebe a ma ama na-egosipụta ebe ndina na-edere Mae West na-eme ka ihe ndina nke Pirelli Tire gbara gburugburu.
Ụdị ihe na-adọrọ adọrọ na Dali nọ n'ebe nile - ọbụna ọdọ mmiri!
Otu n'ime ụlọ ndị kasị adọrọ mmasị n'ime ụlọ Dali bụ ime ụlọ ahụ, ebe ọzọ dị ndụ dị ka ebe a na-akpọ domed circle, na mgbe ọ na-egosi obi ụtọ ma jiri ihe ndina na okpu isi gbara ya gburugburu, anyị jidere na anyị ga-eguzo n'etiti etiti ya . Mgbe ị nọ n'etiti oghere a dị ichiiche, malite ikwu okwu n'olu dara ụda ... ị ga-anụ olu gị na-adaghachi na mgbidi! Ọ bụ ahụmahụ dị nro na nke dị nro. Ozugbo ị na-aga n'akụkụ, nke ahụ ga-apụ n'anya. Ihe dị ịtụnanya (na ọchị)!
Ụlọ Dali - ebe mara mma nke dị n'etiti ụlọ.
Ulo ime akwa nwere akwa akwa di iche iche ma mara mma, ndi a na-adi nma n'iri uhie na obere okwuru onu ogugu, ya na windo nke chere ihu n'onu mmiri mmiri. Anyị nwere ike iche echiche nke ụtụtụ ọ bụla ka ha biliri iji hụ nlele ahụ. Ka ị na-agagharị, ị ga-ahụ na ị na-asọgharị site na obere ụlọ nrịgo na steepụ, otu n'ime ha na-eduga n'otu ọnụ ụlọ ebe a na-edozi agba ya na ihe ndị ọzọ. N'ihe dị ka akụkọ ihe omimi a, ọ bụ ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ ya, mejupụtara ya na usoro mgbidi nke na-ekwe ka e bulie akwụkwọ mpịakọta ya ma wedata n'ala ahụ ka ọ na-ese. Onye ndu ahụ gwara anyị na, ka na-anọdụ ala n'ebe a, ọrụ ikpeazụ ya na-ezughị ezu na-adabere na nwelite. Dị ka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ windo nile dị na ụlọ Dali, ụlọ ọrụ ya na-eche ihu n'ikpere mmiri n'ọdụ ụgbọ mmiri iji weghara ìhè kachasị mma.
A na-adaba n'ime nchekwa ngwa ngwa Dali - aka ekpe dịka ụbọchị ọ nwụrụ.
Mgbe anyị na onye ndu ahụ laghachiri, onye nọgidere na-akọrọ ahụmahụ anyị na akụkọ ihe mere eme nke ebe obibi ahụ, ọ na-eme nleta anyị site na mkparịta ụka banyere ihe ndị dị mma na ihe nkenke dị iche iche banyere ndị nwe, Salvador na Gala.
N'ịbụ ndị na-agafe n'ime ime ụlọ ahụ dị oke mma, anyị na-aga n'ọdọ mmiri ahụ iji gaagharị na gburugburu mmiri nakwa dịka agbakwunyere na oghere ndị o kere. N'ọzụ ọdọ mmiri ahụ bụ ebe a na-ekpuchi ekpuchi jupụtara n'ụgbụgbọ ọnụ na ihe ndị mara mma. Ọ bụ ihe niile anyị nwere ike ghara ịnọdụ ala ma nọrọ jụụ ruo ụbọchị ọzọ!
Dịka onye na-anụ ọkụ n'obi, enwere m otu arịrịọ na njedebe nke ụbọchị - na m ga-enwe oge ịnọ ọdụ n'ọdụ ụgbọ mmiri na eserese ese foto site na ihe gaara abụ echiche Dali. Enweta m akwụkwọ, ma n'oge ahụ ụgbọ ala si Portlligat ruo Barcelona adịghịzi adọba ụgbọala na ntinye, na enweghị ike ịnweta mpe mpempe akwụkwọ m, enwere m ụjọ!
Mgbe m nụchara banyere mmechuihu m, nnwere onwe anyị na onye nduzi nlegharị anya na-agba m ọsọ site n'ịchụ nta mpempe akwụkwọ na mkpịsị akwụkwọ ka m wee nwee ike mezue ozi m iji zie ebe nnukwu onye eserese depụtara. Ịnọ ọdụ n'elu nkume n'elu mmiri dị jụụ ka m na-esere ọnọdụ ahụ n'ihu m bụ otu n'ime ncheta kachasị m ụtọ nke njem.
Edere echiche site na anya Dali.
Ọ bụrụ na ị na-akpali gị, ọ bụrụ na akụkọ ihe mere eme na-emegharị gị, wepụta oge iji gaa na mpaghara ebe a nke Spain ma hụ Dali n'onwe gị. Ọ bụ ezie na a na-ahụ ọrụ ya n'ụwa nile, ọ dịghị ihe dịka ịhụ n'ezie nchịkọta ya na ihe ngosi nka nke ọ mere.
E nwere mmetụta a na-apụghị ịkọwa akọwa ọ bụla mgbe ọ na-eje ije n'ụlọ nzukọ ebe o bi karịa ihe karịrị afọ 40, iji hụ ebe ọ na-emepụta nkà ya na-adịghị agafe agafe, na ịnọdụ ala n'ikpere mmiri ebe ìhè si n'ike mmụọ nsọ ya. Ịhụ ebe ọdịda anyanwụ na-apụ na saịtị ahụ ka anyị mere ka anyị laghachi na Barcelona bụ mmechi nke ndụ ọ bụla nke m ga-echezọ.
Ihe ndi eji eme njem maka Costa Brava
Map na Figueres Barcelona - Mee atụmatụ njem gị site na Barcelona na map a
Expedia.com - Ebe obibi maka ego ma ọ bụ nnukwu ụgbọ elu na hotels dị na Barcelona na Costa Brava.
Akwụkwọ ntụziaka a tụrụ aro: Lonely Planet Catalunya na Costa Brava
Akwụkwọ na-atụ aro: Salvador Dali na ulo
Category: Arts & Music, Europe, kasị Popular, Nyocha, Spain, Nhazi njem Tags: art, Barcelona, cadaques, Ee, fig, Spen
← Ihe Ngwurugwu 5 na Fort Lauderdale
Nyochaa: Ụsọ Oké Osimiri Moher-njem →
12 Comments na "Ụbọchị Njem Site na Barcelona: Costa Brava na Salvador Dali"
Lee ihe nka a di oke egwu! Amaara m ebe m chọrọ ịga ọzọ !! Aga m egosi di m nke a. Agaghị m echedịdị na m ga-aga ebe a ma ọ bụrụ na ị na-atụgharị ma na-achọgharị nkà na omenala yiri ka ọ ga-abụ njem dị egwu ma na-atọ ụtọ. Enwere m mmasị ịgụ nke a.
Daalụ Britanica! Ọ bụ ebe dị egwu ma dị mma, nke bara uru oge na ego.
Nke ahụ bụ n'ezie njem njem. Foto ndị a dị mma .. Enwetụbeghị m Museum n'oge na-adịghị anya, nke ahụ abụrụla otu n'ime ọdịmma m. Ọ ga-amasị m ma m nwere ike iji ezumike m ọzọ gaa ebe ahụ ..
Ọ bụ ebe dị jụụ, mara mma ma jupụta n'akụkọ ihe mere eme!
Ebe ahụ dị egwu. Ọ ghaghị ịdị ka ịmalite ije na mbara igwe.
N'ezie, nke ahụ bụ ụzọ dị mma isi tinye ya, Erika. Ọ bụ ebe dị egwu, na-enye gị ụfọdụ ezi nghọta na otú Dali pụrụ iche ma dị mma. Ebe magburu onwe ya ịga!
Lee, ọrụ ebube. Enwere m mmasị ịgụ nke a. Daalụ maka ịkekọrịta. Regent banyere nnukwu ọrụ gị. Na-esochi!
Oh oh! Nke ahụ dị ịtụnanya. Dị ka i nweela obi ụtọ na ikpo ọkụ! Hụrụ ya n'anya.
N'ezie mere! Daalụ Hana!
Gị ụbọchị njem na-ada kpam kpam ume na-ewere! Biko ị nwere ike ịgwa m ụlọ ọrụ njegharị ị jiri na ole ọ na-eri? Daalụ n'ọdịnihu !
Hi Alyssa! Anyị chọtara ya n'ụzọ Viator. Ụlọ ọrụ dị egwu anyị hụrụ n'anya na-arụ ọrụ!